“Reer Sool-ow, ninkii noogu kursiga jeclaa ee Cali-warancadde kursigii weynaa wuu ka kacay, taasina waxa ay ina tusaysaa in Saylici-na ka kici karo.” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Reer Sool-ow, ninkii noogu kursiga jeclaa ee Cali-warancadde kursigii weynaa wuu ka kacay, taasina waxa ay ina tusaysaa in Saylici-na ka kici karo.”
Hargeysa:(Hubaal)-Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali-waraabe ayaa ka markhaati kacay jacaylka iyo xiisaha uu wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dhawaan laga beddelay Md Cali Maxamed Waran-cadde u hayey xilalka qaranka iyo sida aanu weligii uga dhergin inuu xil qabto. Guddoomiye Faysal oo isagoo magaalada Laascaanood ku sugan reer Sool-na xusuusinaya kursi jacaylkii wasiir Waran-cadde, waxa uu hoosta ka xariiqay in mar hadii uu Waran-cadde ku qancay xilka-qaadistiisa la fili karo in rag badan oo kalena kuraasta bannayn doonaan,”Ninkii noogu kursiga jeclaa ee Cali-warancadde kursigii weynaa wuu ka kacay, taasina waxa ay ina tusaysaa in Saylici-na ka kici karo.” Ayuu yidhi Faysal Cali-waraabe.
Wasiiirkii hore ee arrimaha gudaha Somalian doo xilka wasaaraddaas soo hayey muddo saddex sano iyo badh ah, ayaa dhawaan waxa xilkaas ka qaaday madaxweyne Siilaanyo, iyadoo booskiisiina lagu beddelay masuul kasoo jeeda gobolka Sool, waxana la filayaa in kursiga laga qaaday uu Somaliland haybadeeda wax badan usoo kordhin doono, maadaama lagu soo dhaweeyey gobollo aan hore kuraasidaas loo siin jirin.
Marka laga yimaaddo kursiga muhiimka ah ee la siiyey shacabka reer Sool, waxa xusid mudan in Ex. Wasiir waran-cadde uu xil ku nool soo ahaa tan iyo markii ay Somaliland madaxtinimadeeda lasoo noqotay, isagoo xukuumaddii madaxweyne Rayaale-na xilal kala duwan oo wasiirnimo kasoo qabtay, isla markaana gacantiisa ku baabi’iyey xisbigii UDUB oo uu musharrax madaxwene ka noqday, balse uu markii dambe tahli kari waayey inuu tasaasul ka sameeyo, kadib markii uu xisbigu laba garab u kala jabay.